Xiddig ka tirsan Barcelona oo shaaca ka qaaday hal arrin uu ka codsaday Cristiano Ronaldo – Gool FM - Idman News
Xiddig ka tirsan Barcelona oo shaaca ka qaaday hal arrin uu ka codsaday Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Barcelona) 09 Okt 2019. Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Barcelona ayaa wuxuu shaaca ka qaaday hal arrin muhiim ah uu ka codsaday Cristiano Ronaldo, inta lagu gudi jiray suuqii dhawaa ee xagaaga.
Xiddiga khadka dhexe kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Croatia ee Ivan Rakitić ayaa qiray inuu la soo xiriiray Cristiano Ronaldo isla markaana uu ka codsaday inuu ku biiro kooxda Juventus suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Dhinaca kale xiddiga reer Croatia ee Ivan Rakitić ayaa wuxuu tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu u dagaalamo astaanta kooxda reer Catalonia ee Barcelona.
Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ku fashilantay inay la saxiixato Ivan Rakitić, sababa la xiriira agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Fabio Paratici oo soo jeediyay inay heshiis isdhaafsi ah la galaan Barcelona.
Qorshaha kooxda Juventus ayaa wuxuu ahaa in Ivan Rakitić uu ku biiro Bianconeri, taasi badalkeeda Federico Bernardeschi uu isna u dhaqaaqo kooxda Barcelona, iyadoo heshiiska la qorsheenayay in Juve ay hesho qiimo dhan 23 milyan euro oo dheeri ah.
Doorka muhiimka ah ee Ivan Rakitić ayaa hoos u dhacay xilli ciyaareedkan, wuxuuna daris la noqday kursiga keydka, xiddiga reer Croatia ayaa ciyaaray kaliya 157 daqiiqo oo horyaalka La Liga ah iyo 30 daqiiqo oo Champions League ah.
Haddaba Ivan Rakitić ayaa wareysi uu ku bixiyay “24sata” ee dalka Croatia wuxuu ku sheegay in Cristiano Ronaldo uu xiriir la soo sameeyay shaqsi ahaan si uu uga codsado inuu ku biiro Juventus, laakiin Barcelona ayaa weydiisatay lacag aad u badan ee gaarsiisan 50 milyan euro.
Ivan Rakitić oo arrintan ka hadlayay ayaa wuxuu yiri:
“Suuqii xagaaga, Cristiano Ronaldo shaqsi ahaan ayuu iila soo xiriiray, wuxuuna ii xaqiijiyey in qof walba ee ku sugan qolka labiska ee kooxda Juventus uu doonanayo inaan ku biiro, laakiin Barca ayaa weydiisay Juve 50 milyan euro, howlgalkana sidaas ayuu ku fashilmay”.
“Xagaagii waan la hadlay Josep Maria Bartomeu iyo Messi, qof walbaa wuu ogaa inaan haysto fursado aan ku baxi karo, ma aheyn wax sir ah, wali waxaan la rabaa waxa ugu fiican Barçelona”.
“Laakiin waxaan doonayaa inaan u dagaalamo kooxda darteed, waxaan diyaar u ahay inaan aado garoonka markay ii baahdaan, laakiin haddii ay wax isbaddelaan, waa inaan fadhiisnaa oo aan wadahadalnaa”.
“Ma aqaano waxa dhici doona, laakiin xaaladdeyda wey adag tahay, waxaan rabaa inaan ciyaaro, ma ahan kaliya inaan qeyb ka noqdo kooxda, waxaan isku dayi doonaa sida ugu fiican si aan waxyaabo badan u bedelo kulamada soo socda , qandaraaskeyga labo sano ayaan ka dhiman, ma jirto meel ka fiican Barça, waa kooxda ugu fiican adduunka, laakiin waxaan doonayaa inaan ciyaaro, ma doonayo inaan ku dhax wareego magaalada”.
Shaxda rasmiga ah kulanka xiisaha badan horyaalka Premier League ee koxoaha Man United iyo Chelsea – Gool FM
Sadaxdaan tobabare ayaa ku tartamaya abaalmarinta tababaraha sannadka ee FIFA….
Previous Previous post: Madaxweyna Dene oo Kismaayo uambabaxay – Radio Daljir
Next Next post: Munaasabadda Furitaanka Kal-fadhiga 6aad ee Baarlamaanka dalka oo bilaabatey